Galmudug iyo Ahlusuna oo diiday in Wasiir ka tirsan Xukuumadda uu qeyb ka noqdo Shirka Jabuuti – Hornafrik Media Network
Iyadoo lagu wado in saacadaha soo socda uu Jabuuti ka furmo wada hadalo u dhaxeeya Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in muran iyo buuq uu ka dhashay in Wasiir ka tirsan Xukuumadda uu shirka qeyb ka noqdo
Wararka ayaa sheegaya in Wakiilada Urur Goboleedka IGAD oo diyaarinayay shirka ay ku soo dareen Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha C/llaahi Faarax Wehliye oo la sheegay in Ra’iisul Wasaaraha u diray inuu shirka ku matalo.
Hase ahaatee Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa ka hor-yimid inuu shirka qeyb ka noqdo Wasiiru dowlaha, waxaana ay sheegeen in aanay raalli ka aheyn in shirka goob joog ka ahaado, iyagoo ka tirsanaya eedo kala duwan.
Xubnaha Galmudug uga qeyb galaya wada hadalka ayaa laga soo xigtay in Wasiiru dowlaha Arrimaha Gudaha uu ahaa ninkii isku dayay burburinta Maamulka Galmudug, isla markaana uu xafiiskiisa ka soo saaray warqadii lagu taageeray mooshinkii Xildhibaano ka tirsan Galmudug ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Madaxweyne Xaaf.
Sidoo kale Maamulka Ahlusuna ayaa iyana iska diiday in sidoo kale Wasiiru dowlaha shirka ka qeyb galo, waxaana ay ka door bideen in hadii dowladda ay cid soo dirsaneyso inay soo dirsato Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa.
Labada dhinac Ahlusuna iyo Galmudug ayaa doonaya in hadii ay cidi dowladda ku mataleyso shirkaas uu ka soo qeyb galo Wasiir Juxa oo ah Wasiirkii lahaa mudnaanta, iyagoo u muuqda kuwo ka didsan tallaabooyinka qarsoon ee uu Ra’iisul Wasaaraha wado.
Madaxweynaha Maamulka Ahlusuna Sheekh Shaakir ayaa dhowaan sheegay in iyaga iyo Galmudug aanay dagaalsaneyn, balse ay jiraan dad diidan inay midoobaan, isla markaana in la wada hadlo aanay doonin.
Wada hadalka u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlusuna oo ay garwadeen ka tahay IGAD ayaa wajigiisa koowaad ka dhacay magaalada Nairobi, iyadoo shirka ka furmaya Jabuuti looga hadli doono awood qeybsi dhex mara labada dhinac, si ay u noqdaan maamul mideysan.
Madaxweynihii hore ee Zimbabwe oo weli saameyn ku leh siyaasada dalkiisa